ဘယ်လောက် 4-DHEA testosterone ဟော်မုန်းပြောင်းလဲလာတယ်? | AASraw
/ဘ‌‌လော့ခ်/4-DHEA , ပြတိုက်/ဘယ်လိုအများကြီး 4-DHEA testosterone သို့ပြောင်းလာ?
အပေါ် Posted 06 / 30 / 2018 by ၏ ရေးသားခဲ့သည် 4-DHEA, ပြတိုက်.
1.What 4-DHEA Is
2.How 4-DHEA လုပ်ငန်းခွင်မ
3.Is 4-DHEA တစ် Prohormone
4-DHEA အကျိုးကျေးဇူးများကို 4.What ရှိပါသလား
5 ။ 4-DHEA အနေနဲ့ဟို Steroid တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်
6-DHEA ကိုသုံးပါရန် 4.How?
7 ။ 4-DHEA ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး advoid လုပ်နည်း
အများကြီး 8-DHEA testosterone ဟော်မုန်းပြောင်းလဲလာတယ် 4.How
DHEA နှင့် 9-DHEA အကြားခြားနားချက် 4.What Is
10.Top5လူကြိုက်များသော Prohormones
I.4-DHEA အမှုန့် အခြေခံဇာတ်ကောင်:
1 ။ 4-DHEA ဆိုတာဘာလဲ
4-DHEA အမှုန့်571-androstene-44b-ol, 8-one, 4β-Hydroxy-3-androsten-17-one, 3β-hydroxyandrost-4-en-17-one, 3β-hydroxy စတဲ့လူသိများတဲ့ CAS 4-17-3, CAS 4-17-3 -D4-androsten-17-one, 3β-hydroxyandrost-4-en-17-one, 4β-hydroxy-etioallocholan-4-en-5-one ။ XNUMX-Dehydroepiandrosterone (XNUMX-DHEA) သည် steroid ဖြစ်ပြီး XNUMX-dehydroepiandrosterone ၏ isomer ဖြစ်သည်။
4-DHEA အမှုန့် (Non-17AA) PRO-Steroid တစ်မျိုးတစ်သဘာဝကျကျဖြစ်ပေါ် Non-methylated ဖြစ်ပါတယ်။ 4-DHEA အီစထိုဂျင်မှ aromatize နိုငျသျောလညျးကဖြစ်ကောင်းမြင့်သောအီစထိုဂျင်ဆက်စပ်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်စေရန်လုံလောက်သည်မဟုတ်။ ယေဘုယျအားရလဒ်များကိုမှဆင်တူဖြစ်လိမ့်မည်သို့မဟုတ်မူရင်း 4-အေဒီ 2004 ပြန်ပိတ်ပင်ခဲ့။ ဒီဒြပ်ပေါင်းမြင့်မားဆေးများခွန်အား၌အလယ်အလတ်တိုးတက်မှုနှင့်အတူ, ကြွက်သားထုထည်အတွက်တရားမျှတစွာပိန်အကျိုးအမြတ်ထုတ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီထုတ်ကုန်တစ်ခု aromatase inhibitor စီမံခန့်ခွဲခြင်းဖြင့်တုနိုင်, သို့သော်ဤအဓိကအားနှင့်အတူစတင်ဒီဒြပ်ပေါင်းများအသုံးပြုခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်အနိုင်ယူတံ့သောအီစရိုဂျင်ပြောင်းလဲမှအချို့သောဖောင်းထုတ်လုပ်ရန်လိမ့်မည်။
အမည် 4-DHEA, 4-Andros, 4-အေဒီ
အရည်ပျော်မှတ် 138-141 ℃
အရောင် အဖြူရောင်သို့မဟုတ်ပိတ်အဖြူ Crystalline အမှုန့်
ပို့ဆောင်ချိန် ငွေပေးချေမှုပြီးနောက် 12 နာရီအတွင်း
ငွေပေးချေစနစ် WU, MG, BT, TT
ဖေါ်ပြချက် 4-DHEA တစ်သဘာဝကျကျဖြစ်ပေါ် Non-methylated (Non-17aa) လိုလားသူ Steroid တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ 4-DHEA, DHEA ကဲ့သို့ androstenedione / androstenediol ကပြောင်း 2b-HSD နှင့် 3b-HSD ပတျသကျတဲ့ 17 ခြေလှမ်းပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုလိုအပ်တယ်, ပြီးတော့ testosterone ဟော်မုန်း။ အဘယ်အရာကို DHEA ထံမှ 4-DHEA အနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသောက 4th အနေအထားထက် 5th အတွက်နှစ်ဆနှောင်ကြိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည် DHEA လုပ်ဖို့ကိုတွေ့ထားပြီးတူအီစရိုဂျင် receptor အပေါ်သို့တိုက်ရိုက်သရုပ်ဆောင်မ 4-DHEA လျော့နည်းအီစထိုဂျင်စေသည်။
ဒီဒြပ်ပေါင်းသဘာဝကျကျဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့် Non-methyl ဖြစ်ပါတယ်ကတည်းကခြုံငုံဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမျှမျှတတပျော့ဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့သျောလညျးမွငျ့မားဆေးများလည်းအဆီပြန်အသားအရေ, ဝက်ခြံများနှင့်တိုးမြှင့်သွေးပေါင်ချိန်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြလိမ့်မည်။ ဒီ Steroid တစ်မျိုး Non-17AA သောကြောင့်ထိုသို့အဆိုးဟာ HDL / LDL အချိုးထိခိုက်အကြောင်းကိုဒီထက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုရှိသင့်ပါတယ်။ ဒီဒြပ်ပေါင်းကလည်း DHT နှင့်အခြား 5A-လျှော့ချ metabolites ကူးပြောင်းနိုင်ပါတယ် testosterone ကူးပြောင်းနိုင်ပါတယ်လို့ပဲ။ ဒါကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အန်ဒရိုဂျင်အာနိသင်ချို့တဲ့၏လိင်စိတ်သို့မဟုတ် gyno နှင့်အတူပြဿနာများကိုဖန်တီးစေခြင်းငှါ progestational သို့မဟုတ်အတော်လေး Non-အန်ဒရိုဂျင်ဒြပ်ပေါင်းများနှင့်အတူကောင်းတစ်ဦး stack အဖြစ်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။
2 ။ 4-DHEA ကိုဘယ်လိုအလုပ်လုပ်ပါသလား
ကိုလောင်ခံရပြီးနောက် 4-DHEA (4-Andros) သင့်သွေးကြောထဲသို့ဝင်ခြင်းနှင့် testosterone ဟော်မုန်းသို့ပြောင်းပေးပါတယ်။ အဆိုပါဒြပ်ပေါင်းသည်သင်၏လိင် drive ကိုတိုးမြှင့်နေချိန်တွင်အရွယ်အစားနှင့်အစွမ်းသတ္တိကိုတိုးမြှင့်ဖို့ရရှိလာတဲ့တစ်သိသိသာသာမြင့်မားတဲ့ဟိုအပြုအမူရှိသည်ဖို့စတင်ပါလိမ့်မည် - "။ အာလဖအမျိုးသား Ecstasy" မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်သောသင်ပေးခြင်း
3 ။ 4-DHEA (Is571-44-8Prohormone?
Prohormone ကဘာလဲ? Prohormones အများဆုံးဟော်မုန်းရလဒ်များကိုတစ်ခုတတ်နိုင်ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ကြသည်။ Prohormones နှုတ်ယူကြသည်ဒြပ်ပေါင်းများဖြစ်ကြသည်။ Prohormone ဝင်းလုပ်ရပ်များတစ်ဦးဟော်မုန်းများအတွက်ရှေ့ပြေးဖြစ်ကြသည်ကိုဆိုလိုသည်။ သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တွင်, သူတို့ထိရောက်သောမရှိကြပေ။ သူတို့အလုပ်သူတို့သွေးကြောမှတစ်ဆင့်ဖြန့်ဝေရန်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ prohormone တစ်ဦးဟော်မုန်းပြောင်းလဲနေသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ပြုလုပ်ဟော်မုန်းပမာဏထိန်းညှိ။ အားကစားသမားစွမ်းဆောင်မှုနှင့်ကြွက်သားကျန်းမာရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာရန်ပရိုတိန်းကိုပြောင်းလဲနိုင်တဲ့လိုလားသူပရိုတိန်းဖြစ်ခြင်းတစ် prohormone ၏စဉ်းစားပါ။
4-DHEA သည် prohormone ဖြစ်ပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရလျှင် 4-DHEA သည် prohormone မဟုတ်ပါ၊ ဒါကြောင့် 4-DHEA ကို "လိုလားသူလိုလားတဲ့ဟော်မုန်း" အဖြစ်မှတ်ယူပါ။
4-DHEA (4-Andros), အသုံးပြုသူများသည်အီစထိုဂျင် Overload ၏အနုတ်လက္ခဏာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိဘဲ DHEA ကနေအကျိုးခံစားရဖို့ခွင့်ပြုမယ့် prohormone ဖြစ်ပါတယ်။ 4-DHEA တစ်သဘာဝကျကျဖြစ်ပေါ် DHEA isomer ဖြစ်ပါတယ်။ DHEA, ဒါမှမဟုတ် dehydroepiandrosterone, အ adrenal gland ကနေထုတ်လုပ်ဟော်မုန်းဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ adrenal gland ကျောက်ကပ်၏ထိပ်ပေါ်မှာသောဂလင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့လိင်ဟော်မုန်းနဲ့ Cortisol ထိန်းညှိကူညီသင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အရေးအပါဆုံးဟော်မုန်း၏အဓိကထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျကောငျးမှကျန်းမာရေးနှင့်ရှင်သန်မှုအတွက်ဤဟော်မုန်းလိုအပ်ပါတယ်။ အရေးအပါဆုံးဟော်မုန်းတ adrenal ဂလင်းများကထုတ်လုပ် adrenaline ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုအခြေအနေများရန်သင့်ရန်ပွဲသို့မဟုတ်လေယာဉ်ခရီးစဉ်တုံ့ပြန်မှုသင့်ရဲ့ကျောက်ကပ်ပေါ်ဤအကြောင်းဝေဖန်ဟော်မုန်းကနေလာပါတယ်။
ဟော်မုန်း DHEA သည့် adrenal ဂလင်းကနေထုတ်လုပ်ပေမယ့်ဦးနှောက်လည်းစေသည်။ DHEA ကြွက်သားအရွယ်အစားနှင့်ကြွက်သားကျန်းမာရေးတိုးမြှင့်ဖို့လိုခငျြသူမြားသဖွငျ့အမြားဆုံးဆန္ဒရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်သောအန်ဒရိုဂျင်နှင့်အီစရိုဂျင်,fထုတ်လုပ်မှုများအတွက်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်အသက်အရွယ်နှင့်အမျှခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ DHEA ထုတ်လုပ်မှုလျော့နည်းစေသည်။ ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင် DHEA အတွက်လျှော့ချရေးဟော်မုန်းရောဂါလျှော့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုနှင့်အရိုးပွရောဂါစေပါတယ်။
4-DHEA ကျန်းမာအန်ဒရိုဂျင်လှုပ်ရှားမှုလှုံ့ဆော်ပေးခဲ့တယ်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ DHEA အဆင့်ဆင့် restore စေခြင်းငှါတစ် prohormone ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ, လက်ျာအချိန်တွင်ဖြစ်ပေါ်သည်အထိဒါဟာမလှုပ်မရှားနေဆဲဖြစ်သည်။
4 ။ 4-DHEA အကျိုးကျေးဇူးများကိုအဘယျသို့ဖြစ်ပါသလား
ဖြည့်စွက်ကာ, 4-DHEA အကျိုးကျေးဇူးများကို ဤအရလဒ်များကိုရှိသည်ဖို့မျှော်လင့်ထား:
သင့်လျော်သောအာဟာရအချိန်ကိုက်နှင့်အတူ, သင်ရသောအခါပယ်သံသရာလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့လမ်းပိုမြန်လေ့ကျင့်ခန်းကနေ recover သတိထားမိပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျအားကောင်းစိုက်ထူနှင့်ပိုပြီးအစွမ်းထက် orgasm သတိထားမိပါလိမ့်မယ်။ သင်အိပ်ရာပိုမိုစွမ်းအင်ရပါလိမ့်မယ်သတိထားမိပါလိမ့်မယ်။
ဟုတ်ပါတယ်, ထိပ်နှစ်ခု 4-DHEA (571-44-8) အကျိုးကျေးဇူးများကိုခွန်အားနှင့်ကြွက်သားကြီးထွားတိုးတက်နေကြသည်။ ဤရွေ့ကားသငျသညျတတိယအကောင်းဆုံး 4-DHEA အကျိုးကျေးဇူးများကိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြီးနောက်သင်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နိုင်ပိုပြီးမကြာခဏပြန်လည်နာလန်ထူအကူအညီဖြစ်လိမ့်မယ်နဲ့ပိုမြန်လာဘ်ရထားတဲ့အထက်တန်းလွှာ physique.The ကိုဖန်တီးရန်ရှာနေတာရှိပါတယ်။
5 ။ 4-DHEA အနေနဲ့ဟို Steroid တစ်မျိုးလား?
နည်းပညာပိုင်း, ဟုတ်ကဲ့။ ဒါပေမယ့်ပုံမှန် steroids နှင့် 4-Andros အကြားကွာခြားချက်ဟာယူနိုက်တက် States.The အကြောင်းပြချက်ဖြစ်လျက်ရှိအတွက်ဥပဒေရေးရာစေသည် 4-DHEA, 4-Andros များအတွက်အခြားရွေးချယ်စရာအမည်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သဘာဝကျကျဖန်တီးမယ့်အပြောင်းအလဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတစ်ခုထွက်ကြိုးစားအသံ - - လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လုပ်အပေါများဆုံးပျံ့နှံ့နေတဲ့ steroids တဦးဖြစ်သည့် dehydroepiandrosterone, DHEA ကိုဆိုလိုတာပါ။
အင်ဇိုင်းပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုတဆင့် 4-Andros ဖြည့်စွက်ပြီးသားအသည်းရှောက်သွားပြီရိုးရာ steroids ဖြစ်လာသည်။
ထို့နောက်သင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သဘာဝကျကျလုပ် testosterone ဟော်မုန်းကဲ့သို့အကိုအသုံးပြုထားတဲ့ Full-လွ testosterone ဟော်မုန်းအဖြစ်သွေးကြောထဲသို့ဝင်။ သို့သျောလညျးအဲဒါကိုလုံခြုံဖြည့်စွက်အောင်, သင့်အသည်းကိုဖကျြဆီးမထားဘူး။
6 ။ 4-DHEA ကိုသုံးပါရန်ဘယ်လိုနေသလဲ?
အရင်ကဆိုရင်, သင် 4-DHEA (ဆေးထိုးသင့်ပါတယ်4-DHEA သောက်သုံးသော) နေ့စဉ် 4-6 မီလီဂရမ်အကြား 300-500 ပတ်ကြာသည်။
အလယ်အလတ်သို့မဟုတ်အဆင့်မြင့်ကာယဗလသို့မဟုတ်အလေးမအားကစား, သင် 6-8 ရက်သတ္တပတ်အဘို့အသွားနိုင်ပြီး 300-750 တစ်နေ့လျှင် 4-DHEA သောက်သုံးသော mg နှင့်အတူသွားပါ။
4-Andros မိုကျသောခံရဖို့မဟုတ်ပါတဲ့ prohormone သောကွောငျ့ဤတင်းကြပ်စွာနောက်တော်သို့လိုက်ရပါမည်။ သငျသညျအချိန်ကိုက်နှင့်စက်ဘီးစီးခြင်းအပါအဝင်အစိုင်အခဲ regimen, ကပ်သေချာအောင်လုပ်ပါ။
ဒီအချိန်အပိုင်းအခြားအတွင်းမှာပဲ, သင်ကြွက်သားကြီးထွားမှု 8-10 ပေါင်ရဖို့မျှော်လင့်ထားသင့်ပါတယ်။
အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း pm တွင်၌သင်တို့၏နေ့စဉ်ဆေးထိုးခြင်း, လေးထဲမှာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနှင့်အခြားတက်ခွဲဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
သို့မဟုတျ, အကောင်းဆုံးရလဒ်များကိုအဘို့, အိပ်ရာမဝင်မီတစ်နာရီသင့်ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်လက်ယာမီသင့်ဖြည့်စွက်များထဲမှတစ်ဝက်ကိုယူပြီး။ ဤသည်ကိုအများဆုံးကြွက်သားကြီးထွားမှု, အစွမ်းသတ္တိကိုတိုးနှင့်ပြန်လည်နာလန်ထူသေချာ။
7 ။ 4-DHEA ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး advoid ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
4-DHEA (4-Andros) မျှဘေးထွက်ဆိုးကျိုး / 4-DHEA ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနည်းငယ်သာရှိပါတယ်။ သင်တစ်ဦးအသေးအဖှဲအီစထိုဂျင်ပြောင်းလဲခြင်း, ကြွက်သားကြွက်တက်, သွေးတိုး, ကျူးကျော်ခြင်းနှင့်အချို့ကိစ္စ gynecomastia (gyno) တွင်တွေ့ကြုံခံစားစေနိုင်သည်။
8 ။ ဘယ်လောက် 4-DHEA testosterone ဟော်မုန်းပြောင်းလဲလာတယ်?
ဒါကလူတိုင်းသိရန်လိုသည်တစ်ဦးမှော်မေးခွန်းဖြစ်ပါသည်။ ဒါပေမယ့်ကံမကောင်းစွာဘဲအဖြေက "မူတည်" ဖြစ်ပါတယ်နှင့်တကယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မူတည်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ သူတို့ထူးထူးခြားခြားမြင့်မားတဲ့ aromatase အဆင့်ဆင့်ရှိပါကထို့နောက်အချို့ကိုသင် estradiol ရပေမည်။ အဆိုပါ HSD အင်ဇိုင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်လျှင်သင် testosterone ဟော်မုန်းအတွက်ကြီးမားတဲ့ထုရိုက်ရနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာတကယ်တစ်ဦးချင်းစီအပေါ်မူတည်ပေမယ့်အချို့လေ့လာမှုများ prohormones အတူ 30% ပြောင်းလဲခြင်းမှတက်ပြကြပါပြီ - သိသာထင်ရှားစွာဖြစ်၏။
ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင်ဤမျှလောက်များစွာသောဒြပ်ပေါင်းများသို့ပြောင်းလဲကတည်းက 4-DHEA (571-44-8) သုံးစွဲဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းသည်သင်၏သံသရာအတွက်သေးငယ်တဲ့ cofactor ကဲ့သို့ဖြစ်၏။ 4-DHEA တကယ်သင့်ရဲ့ stack ထဲမှာအဓိက prohormone မဖြစ်သင့်ပါတယ်။ 1 သို့မဟုတ် 2: 1 အချိုး (- 3: endomorphs 1 အသုံးပွုသငျ့စဉ်2ectomorphs 1 ကိုအသုံးပြုသင့်ပါတယ်သင့်ခန္ဓာကိုယ်အမျိုးအစားပေါ် မူတည်. ) ဒါဟာအကောင်းဆုံးတစ်ဦး3အတွက် 1-DHEA ကဲ့သို့အခြား prohormones နှင့်အတူပေါင်းစပ်အသုံးပြုပါတယ်။
၉။ DHEA နှင့် 9-DHEA အကြားခြားနားချက်ကဘာလဲ
DHEA နှင့် 4-DHEA အကြားခြားနားချက်ဆိုတာဘာလဲ
အမည် DHEA 4-DHEA
အဓိကသက်ရောက်မှု -Anti-အိုမင်း (နုပျိုစွမ်းအင်)
-Muscle ညှာ (Anti-catabolic)
-Immune စနစ်က -Muscle အစုလိုက်အပြုံလိုက် (နိုက်ထရိုဂျင် retention ကို)
-Blood အသံအတိုးအကျယ် (hematopoietic)
မူလတန်း metabolite 5-androstenediol (5-အေဒီ) 4-androstenediol (4-အေဒီ)
ဖေါ်ပြချက် DHEA ကို“ ယေဘူယျ” သို့မဟုတ်ပုံမှန် DHEA ဟုသတ်မှတ်သည်။ ၎င်းကိုနည်းပညာအား 5-DHEA ဟုခေါ်ဆိုနိုင်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်နှစ်ဆနှောင်ကြိုးသည်ပဉ္စမနေရာတွင်ရှိသည်။
DHEA သည် ၁၉၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များ မှစ၍ သက်တမ်းတိုးလူတန်းစားတွင်လူကြိုက်များခဲ့သည်။ ၎င်းကိုစွမ်းအင်နှင့်အထွေထွေသာယာဝပြောမှုတို့ကိုတစ်နေ့လျှင် ၅၀-၁၀၀ မီလီဂရမ်ဖြင့်ပံ့ပိုးပေးသောစွမ်းရည်အတွက်အသုံးပြုသည်။ (၁-၃) မကြာသေးမီက DHEA ၏ပျော့ပျောင်းသော anabolic နှင့် thermogenic သက်ရောက်မှုများကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းမှုကိုတိုးတက်စေရန်အတွက် DHEA ပမာဏမြင့်မားစွာအသုံးပြုခဲ့သည်။ (၁၊ ၄) ဤသည်က DHEA သည်ကြွက်သားများသက်သာခြင်းဂုဏ်သတ္တိများရှိသောကြောင့်ကယ်လိုရီများလွန်းသောအစားအစာအတွင်းဖြတ်တောက်ရန်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်စေသည်။ (၁၊ ၁၇)
DHEA သို့သော်အဲဒါကိုယင်း၏ပျော့အန်ဒရိုဂျင်နှင့်ဟိုသက်ရောက်မှုရရှိသွားတဲ့ဘယ်မှာ 1-androstenediol မှမြင့်မားသောပြောင်းလဲခြင်းရှိပါတယ်, အကြောင်းကို 5% တစ်မှုနှုန်းမှာ testosterone ဟော်မုန်းမှပြောင်းပေးပါတယ်။ (5-8) DHEA ရဲ့ thermogenic ဂုဏ်သတ္တိများ 7-oxo-DHEA ရန်၎င်း၏ပြောင်းလဲခြင်းမှလာကြ၏။ (4)
ကြောင့် DHEA ရဲ့ပျော့အန်ဒရိုဂျင်သက်ရောက်မှုကမရှိသလောက်ဆံပင်ကျွတ်သို့မဟုတ်ဝက်ခြံထုတ်လုပ်သည်။ DHEA အလယ်အလတ်အီစထိုဂျင်သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်သော်လည်းမရှိသလောက် gyno သို့မဟုတ်မလိုလားအပ်သောအီစထိုဂျင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးထုတ်လုပ်ပေးသည်။ (1-3) အခြို့ကိုပိုပြီးအထိုင်များအသုံးပြုသူများသည်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ဦးနှောက်ထဲမှာ neurosteroid လှုပ်ရှားမှုနှင့်ဆက်စပ်သောသော DHEA နှင့်အတူစိုးရိမ်ပူပန်သို့မဟုတ်အိပ်စက်မှုလျော့ကျအစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီ။ (3) သို့သျောဤအကျိုးသက်ရောက်မှုလည်း DHEA တစ်မကြာခဏဖော်ပြခဲ့သည်အကျိုးအတွက်ဖြစ်သော "စိတ်ခွန်အားနိုးစွမ်းအင်" အဖြစ်အစီရင်ခံသည်။
သောကြောင့်အကျိုးခံစားခွင့်နှင့်၎င်း၏မျှမျှတတဟော်မုန်းဂုဏ်သတ္တိများ၏ DHEA ရဲ့ကျယ်ပြန့်ကအလွယ်တကူဖြတ်တောက်ဘို့သုံးနိုင်တယ်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးပိန်အစုလိုက်အပြုံလိုက်အဆောက်အဦသံသရာစဉ်အတွင်းပိန်အကျိုးအမြတ်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်။
4-DHEA တစ်သဘာဝကျကျဖြစ်ပေါ် DHEA isomer ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအနီးကပ်ပုံမှန် DHEA ဆင်တူဖွဲ့စည်းပုံရဲ့ဒါပေမယ့် 4th အနေအထားအတွက်နှစ်ဆနှောင်ကြိုးသိသိသာသာင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများပြောင်းလဲစေပါသည်။
4-DHEA အလွယ်တကူပုံမှန်အစည်းအဝေး DHEA ကျော် 4x ထက်၎င်း၏ဟိုအာနိသင်ကိုပိုမိုတိုးမြှင့်, အစား 5-androstenediol ထက် 2-androstenediol မှပြောင်းပေးပါတယ်။ (6-8, 11) 4-DHEA ကိုလည်းပုံမှန် DHEA နှိုင်းယှဉ် testosterone ဟော်မုန်းတစ်ခုမြင့်မားတဲ့ပြောင်းလဲခြင်းမှုနှုန်းရှိသည်ဖို့မျှော်လင့်ရသည်။ (6, 7) က 4-DHEA ကိုလည်းထို့ကြောင့်တစ်ဦး bulk အကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက်သာလွန်ကယ်လိုရီ retention ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့, thermogenic ဂုဏ်သတ္တိများလည်းမီးလောင်သည့်ကယ်လိုရီကင်းမဲ့။ (4) ဤဟိုအာနိသင်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် thermogenic အရေးယူခွန်အားကိုပိန်တစ်ရှူးကြီးထွားမှု, နှင့်အလေးချိန်အမြတ်အတွက်သိသာအကျိုးအမြတ်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်လျှော့ချ။
4-DHEA androsterone သို့မဟုတ် 1-DHEA တူသော non-aromatizing Steroid တစ်မျိုးနှင့်အတူအလွယ်တကူမျှမျှတတဖြစ်နိုင်သည်ကိုပျော့အီစရိုဂျင်ပြောင်းလဲရပါလိမ့်မယ်။ ယေဘုယျအားလာဘ်အဆိုပါ4steroids ထိန်းချုပ်ရေးအက်ဥပဒေအတွက်ပိတ်ပင်ထားမူရင်း "2004-အေဒီ" ကိုဆင်တူဖြစ်လိမ့်မည်။
အခြား DHEA isomers နှင့်ဝသကဲ့သို့, 4-DHEA သဘာဝကျကျဖြစ်ပေါ်သည် Non-အဆိပ်သင့်။ ထိုကဲ့သို့သောအဆီပြန်အသားအရေသို့မဟုတ်လျှော့ချမွေးဖွားအဖြစ် (9) ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများပျော့နှင့်ယာယီစဉ်းစားနေကြသည်။ အများဆုံးမှတ်သားလောက်ဘေးထွက်အကျိုးသက်ရောက်မယ့်သံသရာပြီးနောက်ရာခိုင်နှုန်းလိုအပ်သောစေသည်ပေးသောသဘာဝက testosterone ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှု၏ဖိနှိပ်မှုပါလိမ့်မယ်။ ယေဘုယျအား 4-DHEA အလွန်လုံခြုံပြီးထိရောက်သောပိန်ကြွက်သားအဆောက်အဦးအေးဂျင့်သည်။
10 ။ ထိပ်တန်း5လူကြိုက်များသော Prohormones
(စ 4-Androsterone အဖြစ်လူသိများ - 4b-hydroxy-androst-4-ene-3-One) 4-DHEA (17-Andros) 4-Androstenediol နှင့် testosterone ဟော်မုန်းတစ်ခုရှေ့ပြေးဖြစ်သော 1-androstenedione, ရန်ရှေ့ပြေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက Two-ခြေလှမ်းပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုတဆင့် 4-DHEA ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း testosterone ဟော်မုန်းသို့ပြောင်းလဲလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။ ရုံ 1-Andros လိုပဲဒီ prohormone Non-methyl နှင့်အသည်းဤသို့အဆိပ်မဟုတ်ပါဘူး။ သို့ရာတွင်ထိုသို့အီစထိုဂျင်မှမွှေးကြိုင်ပေ, ဒါကြောင့်ဒီဒြပ်ပေါင်းများစက်ဘီးသည့်အခါတစ်ဦး aromatase inhibitor (AI အ) ၏အသုံးပြုမှုကိုလိုအပ်ပေသည်။
4-DHEA ၏ A ကောင်းဆုံးထိုးစွမ်းဆောင်ရည်မူးယစ်ဆေးဝါးများ (PEDs) တိုးမြှင့်နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတှေ့အကွုံပေါ် မူတည်. တစ်နေ့လျှင် 300-750mgs ပါလိမ့်မယ်။ အကြံပြုထားတဲ့သံသရာကြာချိန်နှင့်စပ်လျဉ်းအသုံးပြုသူ 6-8 ပတ်က run လိမ့်မယ်။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း, သင်သံသရာစဉ်အတွင်းအီစထိုဂျင်ပိတ်ဆို့ဖို့တစ်ခု aromatase inhibitor ကိုအသုံးပြုသင့်ပါတယ်အဖြစ်တစ်ခုခုပုံမှန်အဆင့်ဆင့်မှာသွေးဖိအားကိုစောင့်ရှောက်ရန်။ 4-Andros သုံးပြီးပြီးနောက်တစ် Mini-ရာခိုင်နှုန်းလိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။ ဤသည်တစ်နေ့လျှင် 25mg မှာ clomid, တစ်နေ့လျှင် 20mg မှာ nolvadex နှင့်4ရက်သတ္တပတ်ဘို့အကောင်းတစ်ကသဘာဝ testosterone ဟော်မုန်းအာနိသင်တိုးမြှင့်တို့ပါဝင်သည်သငျ့သညျ။
(စ Androsterone အဖြစ်လူသိများ - 1b-hydroxy-androst-3-ene-1-One) 17-Andros တစ်ခု endogenous Steroid တစ်မျိုးဟော်မုန်းနှင့် testosterone ဟော်မုန်းရဲ့အာနိသင်၏ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 1 / 7th နှင့်အတူအားနည်းအန်ဒရိုဂျင်ဖြစ်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမိတ်ဆက်ပြီးတာနဲ့ကြောင့် 1-testosterone မှပြောင်းပေးပါတယ်။ ဒီဒြပ်ပေါင်းအီစထိုဂျင်သို့မဟုတ် DHT မှပြောင်းပါဘူးကတည်းကထိုကဲ့သို့ gynecomastia သို့မဟုတ်ရေ retention ကိုအဖြစ်မဆိုအီစထိုဂျင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိမဖြစ်နိုင်ပါ။ ထို့အပြင် 1-Andros Non-methyl ဖြစ်တယ်, ဒါအသည်းထောက်ပံ့ဖြည့်စွက်မလိုအပ်သောအောင်မှာအားလုံးအနည်းငယ်သာသို့မဟုတ်လုံးဝမအသည်းအဆိပ်ရှိသင့်ပါတယ်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ, ကအသွေးတော်အလုပ်ရလဒ်များကိုအသည်းအင်ဇိုင်းတွေအနည်းငယ်မြင့်မားသောပြသရန်ဘို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
5-DHEA (ဓာတုအမည်: 5-DHEA - 3b-hydroxy-androst-5-ene-17-One) သဘာဝကျကျအထူးသကျောက်ကပ်အနီးရှိလူ့ခန္ဓာကိုယ် (အသည်းထဲမှာ adrenal ဂလင်းများကဖန်ဆင်းသောဟော်မုန်းဖြစ်ပြီး, အားဖြင့် အမျိုးသားများတွင်ဝှေးစေ့) ။ သငျသညျပြီးသားသိစေခြင်းငှါအမျှ DHEA ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုလိင်ဟော်မုန်း (အန်ဒရိုဂျင်နှင့်အီစထိုဂျင်) ကိုတစ်ဦးရှေ့ပြေးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နှင့်ထို့နောက် testosterone ဟော်မုန်းသို့ကူးပြောင်းသော androstenedione မှပြောင်းလဲနေဖြင့်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
(စအဖြစ်လူသိများ: 3b-hydroxy-androstane-17-One) Epi-Andros သဘာဝ 5a-reductase အင်ဇိုင်းများကခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင်ထုတ်လုပ်နေသည်။ ဒါကအင်ဇိုင်းတချို့လူတွေအတွက်လျော့နည်းပျံ့နှံ့နေတဲ့ဖြစ်တယ်, ဒါဖြင့်သဘာဝထုတ်လုပ်မှုလူတစ်ဦးအနေဖြင့်လူတစ်ဦးမှကွဲပြားပါလိမ့်မယ်။ နှုတ်ယူတဲ့အခါ, Epi-Andros dihydrotestosterone (DHT) ကိုပြောင်းပေး, ပိန်ကြွက်သားထုထည်, ကြွက်သား, ခိုင်မာသော, တန်ခိုးတော်ကို၎င်း, ကျူးကျော်တိုးမြှင့်အတွက်ဒီဒြပ်ပေါင်းများထိရောက်အောင်, testosterone ဟော်မုန်းအဖြစ်အန်ဒရိုဂျင်အဖြစ်5ကြိမ်ဖြစ်၏။ ဒီ prohormone သုံးနေစဉ်တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်အချို့သောအသုံးပြုသူများသည်ပင်အဆီဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုတိုးကြုံတွေ့ကြသည်။ ဒီဒြပ်ပေါင်းများ "ခြောက်သွေ့တဲ့" (အဘယ်သူမျှမအီစထိုဂျင်ပြောင်းလဲခြင်း) ဖြစ်ပါသည်ကတည်းကမည်သည့်ရေ retention ကိုကြုံနေရမပါဘဲအစွမ်းသတ္တိ, ပိန်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ရဖို့ရန်ရှာနေသည့်အခါ, ကပုံမှန်အားဖြင့်အသုံးပြုသည်။
ကသေးပင်စျေးကွက်အပေါ်မဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကအထူးသဖြင့် prohormone ထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏အမည်ကိုအကြံပြုထားသကဲ့သို့, (စအဖြစ်လူသိများ: 1,4-DHEA - 1,4b-hydroxy-androsta-3-diene-1,4-One) 17-DHEA 2012 အတွက်ပိတ်ပင်ထားခဲ့ဟောင်း Boldione prohormone သစ် DHEA ဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီထုတ်ကုန်များ၏မျှော်မှန်းအကျိုးကျေးဇူးများကိုနှစျယောကျအစာစားချင်စိတ်ဆွနှင့်ပူးတွဲပြုပြင်ဖြစ်ကြသည်။
11 ။ ရောင်းရန် 4-DHEA (571-44-8)
လူအတော်များများဟာတစ်ဦးချင်းစီ prohormone အသုံးပြုသည်နှင့်အဘယ်ကြောင့်သူတို့တစ်တွေအခြို့သောလမ်းကိုယူရပါမည်အဘယ်သို့သောအကြောင်းဤမျှလောက်သတင်းမှားစရာရှိသောကြောင့်စုံလင်သောသံသရာနှင့်ပြီးပြည့်စုံသော prohormone အကြောင်းကိုသိလို။
သငျသညျအစှမျးသတ်တိနှငျ့ကြွက်သားကျန်းမာရေးတိုးမြှင့်ဖို့လိုတဲ့အခါ, prohormones 4-DHEA အကောင်းဆုံးကျန်းမာရေးနှင့်ကြွက်သားစွမ်းဆောင်ရည်ကနေအကျိုးခံစားရဖို့တလမ်းတည်းဖြင့်ဖြစ်ပါသည်။ 4-DHEA နိုက်ထရိုဂျင် retention ကိုခွန်အားနှင့်, ကြွက်သားမှသွေးစီးဆင်းမှု၏အသံအတိုးအကျယ်ကိုအားပေးအားမြှောက်တဲ့ prohormone ဖြစ်ပါတယ်။ နည်းပါးလာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်အတူအထင်ကြီးရလဒ်များကိုရှိနှင့်သင်၏အစွမ်းသတ္တိကို-သင်တန်းနှင့်ခန္ဓာကိုယ်အဆောက်အဦအစီအစဉ် 4-DHEA ထည့်သွင်းခြင်း။
4-DHEA တစ်ဝက်ဘဝ သင်သည်မည်သည့်မလိုလားအပ်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းမရှိဘဲနီးပါးမည်သည့်ဒြပ်ပေါင်းများသို့မဟုတ်သဘာဝအလျောက်ဟိုအတူကသီးနှံများကိုပုံစေခြင်းငှါ, တိုပေမယ့်ဒီအသေးအဖွဲသို့မဟုတ်အပိုရှောင်ရှားအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အလုပ်မအဖြစ်ကအများဆုံးထွက်ရှိသော 1-Andros နှင့် Epi-Andros (ခြောက်သွေ့သောဒြပ်ပေါင်းများ) နဲ့တွဲဖွင့် ရေသိုလှောင်မှု။
အွန်လိုင်းစရောင်းမည် 4-DHEA ကိုရှာဖွေရန်ခက်ခဲသည်မဟုတ်, AASraw (www.aasraw.com) prohormone စီးရီးထုတ်ကုန်ကုန်ကြမ်း, ကောင်းသောအရည်အသွေး, အပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းလုံခြုံပြီးအစာရှောင်ပေးပို့ဝန်ဆောင်မှုပေး။
Tags: 4-DHEA အမှုန့်, 4-DHEA အမှုန့်ကိုဝယ်
12496 Views စာ
Desogestrel ရောင်းရန်ရောင်းရန်: သုံးသပ်ချက်များနှင့်သောက်သုံးသောနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ Megestrol acetate အမှုန့်အဘို့အဆုံးပြီးပြည့်စုံသောနိဒါန်း